Ruwanda ayaa dishay afar nin oo hubeysnaa oo u dhashay Burundi, milateriga ayaa sidaas leh – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Ruwanda ayaa dishay afar nin oo hubeysnaa oo u dhashay Burundi, milateriga...
Ruwanda ayaa dishay afar nin oo hubeysnaa oo u dhashay Burundi, milateriga ayaa sidaas leh
Afar hubeysan oo aan heybtooda la aqoonsan oo ka tirsan militariga Burundi ayaa la dilay Sabtidii kadib markii ay weerareen meel difaac ah oo ay leeyihiin ciidamada milatariga Rwanda ee koonfurta Rwanda, militariga Rwanda ayaa sidaas sheegay.
Ragga hubeysnaa waxay weerareen meel difaac ah oo ka tirsan Ciidamada Difaaca Rwanda (RDF) qeybta Ruheru abbaaro 12:20 am (2220 GMT) waxayna ugu talagaleen in lagu dhibaateeyo dadka ku nool tuulada lagu daydo oo lagu dhisay barnaamij horumarineed oo ay ilaalinayaan booska ku lifaaqan ee RDF. hal kiiloomitir u jirta xudduudda ay la leedahay Burundi, RDF ayaa war qoraal ah ku sheegtay.
Weeraryahannadani waxay dib ugu laabteen Burundi iyaga oo u sii waday meeshii ay lahaayeen ciidamada Burundi waxayna ka tageen qalab milatari oo ay ku jiraan hub iyo raadiyayaal isgaarsiineed, ayay tiri.
Seddex askari oo reer Rwanda ah ayaa soo gaadhay dhaawacyo fudud intii uu socday weerarka, ayaa lagu yidhi qoraalka.
Previous articleMasar, Suudaan, Itoobiya oo guddi ku heshiiyey Biyaha muranka dhaliyay ee Nile
Next articleIn ka badan 90% arrimaha wadahadalka biyo-xireenka Nile waa la xaliyay, Madaxa AU ayaa yiri sidaa
Madaxweynaha muuse biixi oo magacaabey Guddi
Xiisado colaadeed oo u dhexeeya Puntland iyo Somaliland oo ka dhacdey...